80 759 ny namoy ny ainy, ary 297 934 kosa no efa sitrana. Mitana ny lohalaharana hatrany amin’ny isan’ny maty ry zareo Italianina izay efa nahatratra 17 127, raha toa ka 135 586 kosa voa, ary 24 392 no sitrana. Faharoa amin’ny firenena be maty indrindra I Espagne izay efa 13 897 izany ary 140 411 ny voa, ary 43 208 no efa sitrana. Mahatratra 12 370 kosa ny maty tany Etazonia ka ny 1 150 tamin’ireo dia tao anatin’ny 24ora, araka ny fanisana nataon’ny Oniversite Johns Hopkins omaly tamin’ny 8 ora sy sasany hariva ora tany an-toerana. Tafiakatra 388 012 ny olona voa any Etazonia ka mametraka azy ireo ho lohalaharana amin’ny isan’ny olona betsaka indrindra voa. 21 368 kosa no efa sitrana tany an-toerana.
731 no maty tao anatin’ny 24 ora
731 be izao no maty tao amin’ny fanjakan’i New York tao anatin’ny 24ora, araka ny fanambaran’ny Governora Andrew Cuomo omaly talata. Io no isa nidangana indrindra na “nouveau record” tao an-toerana taorian’ny tamin’ny sabotsy 4 aprily izay nahatratra 630. I New York moa no tena ivon’ny coronavirus any Etazonia, ka efa nahatratra 5489 no isan’ny maty tao amin’ity tanàn-dehibe isan’ny goavana eto ambonin’ny tany ity. Manome ny antsasa-manila eo ho eo amin’ny isan’ny maty ao anatin’I Etazonia manontolo ny olona maty any New York.
Miharatsy ny toe-pahasalamany
Nirary fahasalamana ho an’ny Praiminisitra Anglisy Boris Johnson izay mihiboka sy manaraka fitsaboana noho izy tratry ny coronavirus ny Filoha Rosianina Vladimir Poutine. Ampiasana “oxygène” ity Praiminisitra ity satria somary niharatsy ny toe-pahasalamany. Mino aho, fa ny tanjakao, ny herijika ananao, ary indrindra ny toetranao miavaka amin’ny vazivazy dia hanampy anao handresy io aretina io, hoy I Vladimir Poutine tamin’ny “télégramme” niainga avy any Kremlin.
7000 mahery ao amin’ny fameloman’aina
Tafiakatra 10 328 ny isan’ny olona maty ho an-dry zareo Frantsay, ka ny 607 tamin’ireo dia tao anatin’ny 24 ora. 30 000 no any amin’ny hopitaly amin’izao, ary ny 7131 no any amin’ny fameloman’aina n any “réanimation”. Telo herinandro izao ny fihibohana tany. Nilaza ny minisitry ny fahasalamana Olivier Véran omaly, fa hotohizana ny fihibohana any Frantsa, raha ilaina. Mbola tsy tafiditra ao anatin’ny fahafehezana ny coronavirus ny Frantsay. Fantatra ny efa tsy fahandrasan’ny Frantsay ny fitsaharan’ny fihibohana, saingy tsy maintsy hotohizana, raha halalinina ny fanambarana omaly. Efa manomboka mihisatra ny fipariahany noho ny fihibohana sy ny ezaka natao, saingy mbola tsy tena tafavoaka ny ala satria mbola betsaka ny marary isan’andro, hoy io minisitra io.
Gadra Italianina namindra coronavirus tao am-ponja
Miisa 49 farafahakeliny ny gadra tratry ny coronavirus ao amin’ny fonjan’i Lahore any Pakistan. Gadra Italianina izay notanana tany an-toerana noho ny trafikana zava-mahadomelina no voalaza fa namindra tamin’izy ireo. Farafahakeliny 3864 ny olona mitondra ny covid-19 any amin’ity firenena ity, ary efa 54 izao no maty. Sarotra ny fitiliana sy fitsirihana ireo olona mety ho tratry ny coronavirus any amin’ity firenena misy mponina hatramin’ny 200 tapitrisa ity noho ny drafitra sy rafitra ara-pahasalamana tsizarizary.
905 miliara euros ny drafi-panarenana ara-toekarena
Tanteraka omaly ny fanambarana hamehana na “Etat d’Urgence” any Japon, araka ny fampiomanana nataon’ny Praiminisitra Shinzo Abe ny alatsinainy teo, ary nampiharina. Mihatra amina faritra miisa 7 io, ka anisany ny ao Tokyo renivohitra, Osaka, Hyogo, Fukuoka, ny Nosy Kyushu,… Mahatratra 50 tapitrisa ny mponina amin’ireo, ary manome 40% amin’ny Japoney. Mihena 70 hatramin’ny 80% ny fipariahan’ny covid-19 amin’izao fanapahan-kevitra izao, araka ny fahitan’ny manam-pahaizana azy. Marihina fa 3900 eo ny olona efa voamarina fa voa any Japon, ary 80 kosa ny namoy ny ainy. Ara-toekarena dia volabe 108 000 miliara Yens (905 miliara Euros) no hatokana ho an’ny drafi-panarenana.